Mali: Fandriampahalemana Sarotra Atsangana · Global Voices teny Malagasy
Mali: Fandriampahalemana Sarotra Atsangana
MpanoratraMamadou Ben Moussa
Voadika ny 15 Septambra 2016 2:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Español, Français
Sary maneho fandriamapahalemana
Fihokoana, fanonganana fitondràna, fananihambohitry ny mpampihororoho, nanamarika ny fanombohan'ny taona 2012 ny pejy matroka iray teo amin'ny tantaran'i Mali. Tamin'io andro io no rava ireo rehetra nandrafitra ny filaminana tao amin'ity firenena iray ao Afrika Atsinanana ity, izay betsaka tamin'ny mpitazana no nihevitra azy ho toy ny lasitry ny demaokrasia.
Vaky niparitaka niaraka tamin'ny fanombohan'ny fihokoan'ireo touareg ny fandriampahalemana nanjaka tao amin'ny faritra avaratra. Ny fitantanana tsy nahomby nataon'ny governemanta io fihokoana io tamin'izany fotoana izany no nitondra nankany amin'ny fanonganana fanjakana nataon'ny tafika, niaraka tamin'izay fanararaotany niarahana nahita.
Tsy niandry ela ny vokatr'io fanonganana fanjakàna io. Ny korontana niforona dia nanamora ny fananiham-bohitra tany amin'ny roa ampahatelon'ny firenena, nataon'ireo touareg mpihoko niaraka tamin'ireo vondrona djihadista izay nahavita nandrombaka ny fahefàna teny an-tànana'ireo touareg sy nihaza ireto farany mba hametraka ireo faritra ho eo ambany vahohon'izy ireo, ny lalàna charia.
Nataon'i Mali veloma araka izany ny fandriampahalemana, ary noarahabainy kosa ny tsy filaminana, ny tsy rariny. Fanolanana, halatra, fanararaotana tsy an-drariny, izany no lasa fiainana andavanandron'ny vahoaka tany amin'ireo faritra fehezin'ireo mpampihororoho nandritry ny volana maro talohan'ny Janoary 2013 nisian'ny firotsahana an-tsehatra nataon'ny tafiky ny fiombonambe irasampirenea mba hamarana io fijalian'ny vahoaka io. Taorian'io firotsahana an-tsehatra io, nisy ireo fifidianana nokarakaraina, filoha iray vaovao voafidy, ary dia niverina napetraka ny dingana ho amin'ny fandriampahalemana.
Taona telo taorian'ny niverenan'ny rafitra araka ny lalàm-panorenana, niverina tanaty fandriampahalemana ve i Mali? Manjaka ve ny rariny ?
Nanome fanantenana betsaka ho an'ireo Maliana ny nahavoafidy ny filoha Ibrahim Boubacar Keita tamin'ny Septambra 2013 ho eo amin'ny Fitondrana Faratampony. Maripamantarana lehibe mankany amin'ny fitoniana no hitàn'ny Maliana marobe tamin'izany.
Fanokanana ny filoha IBK tamin'ny 2013
Raha nanomboka teo, nisy ireo hetsika natao ho amin'izany, tsy maintsy lazaina kosa fa ela figadona ny hamadihana ilay fandriampahalemana nandrandraina ho tena hita maso. Ekena fa nisy ny fifanarahana iray nifanaovana sonia teo amin'ireo vondrona mpihoko samihafa teo anelanelan'ny May sy Jona 2015, saingy mametraka olana goavana ny fanatanterahana azy sy ny fandikàn'ny sasany amin'ireo nandray anjara tamin'izany ireo teboka sasany ao anatiny.
Araka izany, herintaona mahery aty aorian'ny nanasoniavana azy, mbola atrehan'ny rehetra ireo hetsi-panoherana ny sasantsasany amin'ireo izay voalaza ao anatin'ilay fifanarahana fandriampahalemana.
Toy izany indrindra no niseho tao Gao tamin'ny 12 Jolay lasa eo, izay nisian'ny hetsipanoherana nataon'ireo tanora manohitra ny fametrahana ny ‘’Fahefana Mpisolotoerana ‘’, hetsika izay henjana no namoretan'ny tafika maliana azy, nahafatesana olona 4 ary efa ho telopolo no naratra tamin'ireo tanora.
Any an-kafa anefa, tsy mitsahatra ireo fifandonana eo amin'ireo vondrona samihafa mitam-piadiana, atrehina foana ny fifandonana tsy tapaka, indrindra eo amin'ny “Fandrindràna ny Hetsika Azawad” (vondrona touareg mpitaky fahaleovantena) sy ny Gatia (vondrona touareg mitam-piadiana miaraka miasa amin'ny fitondràna) mba hakàna ny fifehezana ny faritr'i Kidal.
Tsy maintsy anampiana an'izany ny fipoiran'ireo hetsika islamista, mety ho voatosika tany amin'ireo tanàna lehibe ry zareo, taorian'ny firotsahan'ny tafika tamin'ny 2013, saingy nialokaloka tany amin'ireo faritra lavitra andriana (mitokantokana), niverina nifandrindra ary tsy tapaka manao fanafihana toby miaramila, ny farany tamin'izany izao dia ny fanafihana ny toby miaramila tao Nampala ny 19 Jolay teo, niteraka fahafatesana miaramila maliana 17.
Nandritra ny fanomezana voninahitra nataon'ny firenena ho an'ireo miaramila maty tao Nampala nandritra ny fanafihan'ny mpampihorohoro
Tao anaty tatitra iray navoakan'ny Malilink Investigate Reporting Group, fanafihana fampihorohoroana 191 niteraka famoizana aina 385 no voarakitra tao Mali teo anelanelan'ny 20 Jona 2015 nanaovana sonia ny fifanarahana sy ny 25 Jona 2015.
Farany, atrehantsika bebe kokoa ihany koa ny fipoiran'ireo karazana tranga vaovao, ireo fifandonana ifanaovan'ny vondrom-piarahamonina, indrindra fa ny Bambara sy ny Peulh any amin'ny faritr'i Mopti miteraka fahafatesan'olona maro. Tsy ela akory fa vao tamin'ny Sabotsy 27 Aogositra 2016 , nisy fifandonana iray vaovao nahafatesana olona 5.
Eo amin'ny sehatry ny lalàna, raha misy teboka sasantsasany mamelona fanantenana avy amin'ireo manampahefana, indrindra fa ny nisamborana ny kapiteny SANOGO, tomponantoka tamin'ny fanonganana fanjakàna tamin'ny 2012, ary ireo mpitarika ambony fahiny tao amin'ny tafika, tafiditra ao anatin'ny raharaha famonoana ireo miaramila ‘misatroka mena’ ary ny fandefasana ho any amin'ny CPI (fitsarana iraisampirenana) ilay djihadista AHMAD AL FAQI AL MAHDI, izay mbola mandeha amin'izao fotoana izao ny fitsaràna azy, mbola betsaka tamin'ireo heloka bevava notanterahana nandritra ny krizy no mbola afa-maina tsy voasazy.
Fitsarana an'i AHMAD AL FAQUI tao amin'ny CPI
Tao anatin'ny dingana hisian'ny fandriampahalemana, natrehantsika ihany koa ny fanafahana ireo olona sasany noahiahiana ho nanatanteraka fanitsakitsahana henjana ny zon'olombelona.
Betsaka ny feo nidradradradra mba hiampanga io endri-javatra misy io, indrindra fa ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona:
Ho azy ireo, ireo fepetra sasantsasany amin'ilay fifanarahana fandriampahalemana, ohatra ny famelàna heloka nomena ny tomponandraikitra sasany tamin'ireo vondrona mitam-piadiana, isan'izany ilay mpitsara islamika tao Tombouctou, HOUKA HOUKA AG ALFOUSSEINI, dia tambiny omena ny tsy rariny.
Ankoatra izay, betsaka ireo olona niharan'ny fanolànana, halatra, fanapahana rantsam-batana, kapoka no mbola miandry ny hanomezana azy ireo ny rariny.
Aoka hotsaroantsika ety am-pamaranana, taorian'ireny fahitàna samihafa ireny, fa mbola midadasika be ny asa fanorenana ny fandriampahalemana ao Mali. Mbola betsaka ny ezaka tsy maintsy hatao satria lavitra ny làlana hahatongavana amin'izany.
Mba hisian'izany, mety ho fitaovana azo raisina ny fitsaràna tetezamita, saingy tsy maintsy mianatra mifamela ihany koa ny Maliana, na vavy na lahy, mianatra mifampiresaka ary mitàna anjara toerana feno amin'io ny Fanjakàna mpampihatra fitsipika. Saingy mbola ho sarotra ireo rehetra ireo raha tsy mirotsaka amin'ìzany ny fianakaviambe iraisampirenena.
4 herinandro izayZimbaboe